Shina vita amin'ny lamba vita amin'ny lamba vita amin'ny vy any China Gepair mesh
Mamoaka takelaka vita amin'ny aluminium
Fitaovana: Aluminum, varahina
Sequin habe: 3mm, 4mm, 6mm, 8mm, 10mm
Haben'ny tontonana: 0.45m x1.5m na namboarina
Vavaky ny Sequin: lemaka, boribory, Sharp ary Square, sns.
Toetoetra: endrika malefaka, loko isan-karazany, famolavolana lamaody
Loko: namboarina manokana
Fonosana: baomba anatiny, boaty hazo na baoritra ivelany
Fampiasana: sokitra, kitapo, lamba latabatra, akanjo lamaody, kiraro
Aluminium Base Rhinestone Mesh Specifications
Material Vatosaky ny Aluminum + Glass
Sequin habe 2mm, 3mm, 4mm
Haben'ny tontonana 0.45m x1.2m na namboarina
Color Atao ho Manokana
Package Tetezana ao anatiny, boaty hazo na baoritra ivelany
Fampiasana Akanjo, kiraro mpanambady, bikini, akanjon-damba, kitapo sns
Modely maro kokoa
Aluminum Silk vita pirinty
Milina Mesh Fabric Work flow
1. Mividy ny fitaovana (fantsona alloy aluminium) arakaraka ny haben'ny sequin /
2. Avy eo hanenjana ny kasety amin'ny endrika hala
3. Izao no dingana manan-danja indrindra: -Ny lamba Net, aorian'ny fametahana ny milina Al, ity kambana ity dia hatolotra ao amin'ny faritra tenona tenona mba hiarahana amin'ny peratra, ny peratra tsirairay dia mifangaro miaraka amin'ny kofehy 4.
4. Rehefa vita ny harona harato, dia io ny tontonana iray (1.5 * 0.45m)
5. Ity manaraka ity dia manadio ny mason-tsolika ao anaty dobo lehibe iray (tokony ho 5 minitra eo ho eo.) Dia diovintsika amin'ny rano ny loko, fandokoana, fanadiovana ary avy eo ahantona ny maina.
6. Raha tianao ny habe iraisana, dia vita tamin'ity dingana ity izahay, fa raha tadiavinao ny metatra tora-droa, tsy maintsy atambatra ny mesh amin'ny alàlan'ny asa tanana.
Ny tombony vita amin'ny vy vita amin'ny metaly
1. Fireproof: ity karazana lamba tsy vita amin'ny lamba ity dia tsy toy ny lamba, fa tsy azo ihodivirana.
2. Porofom-barotra: lamba vita amin'ny vy tsy mihemotra na mivelatra,
3. Mora fanadiovana: mampiasa sombin-damba fotsiny ianao manala azy rehefa maloto ny lamba metaly.
4. Porofo ny masoandro: Mesh dia tsy hita maso na dia tara-masoandro mafana aza.
Fangatahana vita amin'ny metaly vita amin'ny metaly:
Satria ity karazan-kitay ity dia afaka manapaka ny hety, koa azonao atao ny manapaka ny fesh amin'ny endrika rehetra tianao, toy ny azonao atao ny manao akanjo ho an'ny saribakolinao Barbie tsara tarehy, dia manamboara ravina tsara tarehy ho an'ny tenanao.
Raha tsy izany dia azonao atao ny manamboatra lamba ho an'ny tranonao, mall, hotely ary fivarotana anao. Ho hahaliana kokoa izy io.
Amin'ny teny iray dia azonao atao izay rehetra azonao eritreretina miaraka amin'io fahatelahana io.
Previous: Solika vy coil
Manaraka: Black Oxide Mamatsy tariby vy vy